Donut ကို Htc Magic တွင်ထည့်သွင်းပါ Androidsis
antocara | | HTC က, ရွမ်, လဲ tutorial, Android ဗားရှင်း
မနေ့ကကျနော်တို့ဘယ်လို install နိုင်ပုံကိုဆွေးနွေးကြသည် Android 1.6 သို့မဟုတ် Donut ကို Htc G1 တွင်အသုံးပြုသည်ဒီနေ့အလှည့် HTC Magic။ အဘို့ Donut ကို Htc Magic တွင်ထည့်သွင်းပါ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုရှိသည် - တစ်ခုမှာတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည် HTC တရားဝင် rom သူကပစ္စည်းတွေအတွက်သူ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာတင်ထားတယ် HTC Magic ဂူဂဲလ်သည်၎င်း၏နောက်ဆုံး Io ၂၀၀၉ ကိုပေးခဲ့သည်၊ အခြားတစ်ခုမှာအထက်ဖော်ပြပါပြုပြင်ထားသော rom ကိုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုသည်ကောင်းပါတယ်၊ ပထမကို adb command များမှတဆင့်လုပ်ဆောင်ရမည်၊ ထို့ကြောင့် rom ကိုတပ်ဆင်ခြင်းအပြင်၊ သင်သည်ဤအမိန့်များကိုလေ့ကျင့်ပြီးအခြားအရာတစ်ခုခုကိုလေ့လာပြီးဒုတိယ၏ terminal ကိုပြန်လည်ဆယ်တင်ခြင်းမှတစ်ဆင့်တပ်ဆင်သည်။
မှ androidsis terminal ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်မရှိပါ။
နည်းလမ်းနှစ်ခုလုံးအတွက်သင်ရှိသည် terminal ကိုမှ root access ကို နှင့်ရေဒီယိုဗားရှင်း 2.22.19.26I installed ရှိသည်။
ဒီနည်းလမ်း၏လက်စွဲကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ကပြုလုပ်ခဲ့သည်။ @ josan1990, မနေ့ကကသူ့ Htc မှော်တွင်ထည့်သွင်းရန်အန္တာရာယ်။
SDK Andorid ၁.၆ လွှတ်တင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မှ:
ရန် မင်းရဲ့မှော်အတတ်ကဘာဖြစ်မယ်၊ ငါတို့မှာဘာပြhadနာမှမရှိဘူးလို့ငါတို့တာဝန်မရှိဘူး။
ခ။ မိုဘိုင်းမှအရာအားလုံးပျောက်ပြီးဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်ဆိုလိုတာက settings, sms, mms, email, programs, ဆိုလိုတာက mobile ။
ဂ။ ကျွန်တော်ဘက်ထရီကို ၈၀% ထက်ပိုပြီးအကြံပေးလိုပါတယ် အကယ်၍ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းပိတ်ထားပါက၎င်းကိုအသုံးမကျဟုပြန်ဆိုနိုင်သည်။
ရန် အဆိုပါပါရှိသော compressed ဖိုင်ကို extract လုပ်ပါ Andorid SDK (android-sdk-windows-1.6_r1 ဟုခေါ်သည်) ပင်မ hard drive ၏ root (C: / normal) ၏ root တွင်ရှိပြီးအမည်ပြောင်းပါ HTC က ၎င်းကိုဖွင့်သောအခါဖိုင်တွဲ (၅) ခု (add-ons, docs, platforms, tools, usb_drivers) နှင့်ဖိုင် (၂) ခု (documents.html နှင့် RELEASE_NOTES.HTML) ပေါ်လာသင့်သည်။
ခ။ ထဲမှာ မျှော ကျနော်တို့ Menu ကိုသွား - Settings - Applications ကို - ဖွံ့ဖြိုးရေး - ကို USB debugging နှင့် activate ။
ဂ။ ငါတို့ဆက်သွယ်တယ် မျှော PC နှင့်ပြထားသော hardware အသစ်များပေါ်လာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကို driver များကိုရှာဖွေရန်ပေးသည်။ မည်သည့်နေရာတွင်ကြည့်ရှုရန် Folder ကိုတောင်းဆိုသောအခါ C: / htc / usb_driver ကိုသွားပြီးထိုနေရာမှ driver များကိုယူရမည်။
။ တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့် USB ကြိုးကိုဖယ်လိုက်သည်။ မိုဘိုင်းကိုပိတ်ပြီးပြန်လာသည့်ခလုတ်ဖြင့်ဖွင့်လိုက်သည်။ androids အချို့သည်ဆိုင်ကယ်ပေါ်တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် USB ကိုချိတ်ဆက်ပြီးယာဉ်မောင်းများထပ်မံတောင်းဆိုလာပါကယခင်အဆင့်နှင့်အတူတူလုပ်ပါ မိုဘိုင်းဖုန်းကိုစွန့်ခွာပြီးဒီဖန်သားပြင်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီ၊ ကွန်ပျူတာကိုသွားပြီ။
ရန် Unzip က sign-google_ion-img-14721.zip ကိုဖွင့်ပြီး boot.img, system.img နှင့် userdata.img ဖိုင်များကိုယူပြီး C: / htc / tools / folder သို့ရွှေ့ပြောင်းပါ။
ခ။ "CMD" (သို့) "Command Prompt" (start-programs-accessories) ကိုဖွင့်ပြီး C: /> ကိုမတွေ့မှီ "cd .. " ကိုရေးပြီး၊ ယခုတွင် cd htc နှင့် cd tools ကိုတစ်ကြိမ်ရေးသည်။ ဒီမှာ fastboot flash boot boot.img ကိုရေးမယ်။ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာဘားတစ်ခုပြည့်နေတယ်။ ဘားကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီး၊ command console ထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့နေရာကိုရေးထည့်လိုက်မယ်။ “ fastboot flash system.img” နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။ ပြီးသွားသောအခါပြီးဆုံးသောအခါ“ fastboot flash userdata userdata.img” ကိုရေးပြီး terminal restart“ fastboot reboot” ဖြင့်ပြီးသွားလျှင် USB ကိုဖြုတ်နိုင်သည်။
i ။ Command အကျဉ်းချုပ်အတွက် -
၁။ ကျွန်ုပ်တို့သည် C ၌ရှိသည်။ / (ထိုနေရာတွင် cd .. ) ဖြင့်ရနိုင်သည်။
2. စီဒီ htc
၅။ Fastboot စနစ် system.img
၆။ Fastboot flash userdata userdata.img
3. Post Installation ။
ရန် အထက်တွင်ဖော်ပြပြီးသည်နှင့် terminal သည်ပုံမှန်ပြန်ဖွင့်သည်။ Vodafone, လိုဂို အန်းဒရွိုက် နောက်ဆုံးတော့ configuration wizard ကို Google.
ခ။ ကြှနျုပျတို့မှာ ... ရှိသညျ Andorid ၁.၆ ဒိုးနတ် ထည့်သွင်းထားသည် (မခက်ခဲပါသလော)
ဂ။ ၎င်းသည် APNs နှင့်မပါရှိသည့်အတွက်အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ၊ သင်အချက်အလက်များကိုကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်ရမည်။
။ အခုဆိုရင် root access ရဖို့လိုတယ်၊ ဤ anddddddddkdhdh ဖိုင် terminal ထဲရှိ folder တစ်ခုတည်းမှအောက်ပါတို့ကိုပြုလုပ်သည်။
adb shell ကို 'Enter'
Terminal ကိုသင်ထပ်ဖွင့်ပြီး sdk ၏ tools များသို့ကျွန်ုပ်တို့သွားသည်။
aduser push Superuser.apk / system / app သည် 'ဝင်ရန်'
ကျနော်တို့ root access ရှိသည်
4. အမေးများသောမေးခွန်းများ (FAQ) ။
ရန် ၎င်းသည် command သည်မှားသည်သို့မဟုတ်၎င်းကိုမပြုလုပ်နိူင်ပါက (ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်ဆယ်တင်မှုမှတစ်ဆင့်) ကိုဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်အမှားတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ထို့နောက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။
ခ။ Fastboot flash boot boot.img က INFO များစစ်ဆေးခြင်း၊ လက်မှတ်အတည်ပြုခြင်းမအောင်မြင်ပါ။ ၎င်းဖိုင်သည်ပျက်စီးနေသောကြောင့်ဖိုင်ကိုထပ်မံ download လုပ်ပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် @ josan1990
ငါတို့ download လုပ်တယ် ဤ update.zip ဟုအမည်ပြောင်းထားသော SD ကဒ်သို့ကူးယူပြီး Htc Magic ကိုပိတ်ပါ။ ဖုန်းကို recovery mode (Home + ဖွင့်ပါ) ဖွင့်လိုက်ပြီ၊ ယင်ယင်ယိမ်းယိုင်ခဲ့ပါကအရန်ကူးရန်အချိန်ရောက်ပြီ။ အရန်ကူးခြင်းပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုမီနူးမှရွေးချယ်ရန် Wipe လုပ်ရန်လိုအပ်သည် ဆယ်တင်ရေး utility ကို ပြီးတာနဲ့ Apply update ကိုရွေးပါ။ ပြီးသွားတဲ့အခါငါတို့ Htc Magic မှာ Donut ရလိမ့်မယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » လဲ tutorial » DONUT ကို HTC MAGIC သို့ထည့်ပါ
ကျွန်ုပ်၏လက်စွဲသည်သင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားကောင်းစွာရှင်းပြသည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ပထမဆုံးပြုလုပ်ပြီး ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ထုတ်ဝေသည်။ ဝေဖန်မှုကိုလက်ခံသည်။ and ထုတ်ဝေမှုအတွက် androidsis ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဒုတိယနည်းလမ်းတွင် APN ကိုသင်ပြုပြင်ရမည်လော။
ဒါဟာတရားဝင် update ကိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒုတိယနည်းလမ်းတွင်ငါသည်သင်တို့ကိုစိတ်မချနိုင်သော်လည်းမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ apn အားလုံး၏ဒေတာများသည်ဖိုရမ်တွင်ဖြစ်သည်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ
မင်္ဂလာပါ သင် root ဖြစ်လာတဲ့အစိတ်အပိုင်းမှာဒီ command တွေကသူတို့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ ငါ Mac မှာလုပ်နေတယ်။ ငါ su ကိုထည့်လိုက်ရင် password တောင်းတယ်၊ ငါကွန်ပျူတာ password ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တယ်။ ငါ့ကိုမမှန်ကန်ကြောင်း၊ ၎င်းသည် android file system ကိုဝင်ရောက်သောစကားဝှက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်ဘာလဲသိလား
command များသည် windows နှင့် mac နှစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။ android SDK အတွင်းရှိ tools folder အတွင်း၌တစ်ကြိမ်သာ terminal မှပြုလုပ်သည်။
c: htctools ရှိ "su" နှင့် "Superuser.apk" ကိုကူးယူပါ
၁။ Terminal ကို (home + တွင်) ပြန်ဖွင့်ပါ။
shell ကို 2.adb
3.mount / system ကို
push / su / system ကို / bin / su 5.adb
shell ကို chmod6/ system ကို / bin / su 4755.adb
Superuser.apk /system/app/Superuser.apk ကိုတွန်းအားပေးပါ
shell ကို reboot 8.adb
ငါတို့ donut အတွက်အမြစ်ရှိသည်အဆင်သင့်။
ငါလမ်းညွှန်အရ donut ကိုပထမဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ install လုပ်ပြီးပြီ။ ပြီးပြည့်စုံတယ်။ ဒါပေမယ့် root နဲ့မရဘူး။
* adb ခွံ 'enter'
* su 'enter'
* -o rw, remount -t yaffs2 / dev / block / mtdblock3 / system 'ဝင်ရန်'
* terminal ကိုပိတ်ပါ
Terminal ကိုသင်ပြန်ဖွင့်ပြီး sdk tools သို့သွားသည်။
* aduser push Superuser.apk / system / app သည် 'ဝင်ရန်'
"su" medice ကိုသုံးရန်ကြိုးစားသောအခါကျွန်ုပ်တွင်ခွင့်ပြုချက်မရှိပါ။
ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော -google_ion-ota-14721.zip မှကူးယူ။ မရပါ။
၁.၆ အတွက်အလိုအလျောက်တပ်ဆင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်လက်ခံသောအခါကျွန်ုပ်၏ HTC မှော်သည်သေသွားသည်။ အဲ့ဒီကနေ vodafone မျက်နှာပြင်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးအဲဒီမှာအမြဲတမ်းအေးခဲနေလိမ့်မယ်။
ငါကသူ့ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပရိုဂရမ်၌သင်တို့ကိုပေးသော option ကိုအတူမိုဘိုင်း၏ format နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်သူကငါ့အဘို့တူညီတဲ့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး အဲဒါကငါ့ကိုအမှား E ပေးတယ်။ ဖွင့်လို့မရဘူး / cache / recovery ဖိုင်။
ကျွန်ုပ်၏မိုက်ခရို sd (update.zip) တွင်ထည့်သွင်းရန်ဖိုင်ကိုကူးယူပြီးပါပြီ။ မိုဘိုင်းသည်ကျွန်ုပ်အား usb မှတဆင့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုဝင်ရောက်ခွင့်မပြုသောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကို fix ဖို့တစ်ခုတည်းသောအရာက
ဒိုးနတ် update သည်သင့်ဆီသို့ရောက်လာပြီးသင်လက်ခံသောအခါ၊ မင်း Rom ကိုအရင်ပြောင်းခဲ့တာလား သို့ဆိုလျှင်သင်၌မည်သည့်တစ်ခုရှိသနည်း။
ငါသူ့ကိုလက်ခံခွင့်ပြုလိုက်တယ်၊ ငါအရင်ကဘာတွေရှိခဲ့တာလဲငါမသိဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကဒီဖုန်းကိုဝယ်လိုက်တာငါဘာမှမသိဘူး၊ အကယ်၍ ၎င်းသည်ယခင်ကလည်ပတ်မှုစနစ်ဖြစ်ပါက၎င်းသည် ၁.၅ ဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်ထင်သည်။ သို့သော်၎င်းကို usb သို့ဆက်သွယ်သောအခါ ၁.၀ ထွက်လာသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး အဆိုးဆုံးကတော့ usb မှတဆင့်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုလက်လှမ်းမမှီသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၌ရွေးချယ်စရာများစွာမရှိပါ။
ပါဝါခလုတ်နှင့်အတူအိမ်ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဖွင့်ပါ။ ဘာထွက်လာလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြပါ
ကျွန်ုပ်သည် Android စနစ်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း (2e) ကိုရယူသည်။
နှင့်ရွေးချယ်စရာလေး။ ဤအရာများ၏အဆုံးတွင်အောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အဝါရောင်ရပါသည်။ E: Open / cache / recovery / command မရပါ
သင် update.zip ပြောတဲ့တစ်ခုရတယ်
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ update.zip ကိုငါ့ဖုန်းထဲမှာဘယ်လိုထားရမလဲ။ ဒါငါ့ပြproblemနာပါ ကျွန်ုပ်က၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသို့ကူးယူပြီးပါကအေးခဲသည့်အချိန်၌ကျွန်ုပ်၏ micro SD ကဒ်ကိုမည်သို့ ၀ င်ရောက်ရကြောင်းတစ်စုံတစ်ယောက်အားပြောရန်စောင့်နေခဲ့သည်။
ကောင်းပြီ, sd ဖုန်းကိုထုတ်ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။
မင်းရဲ့အကူအညီအတွက် antocara ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုကွန်ပျူတာနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမလဲဆိုတာတော့မသိပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကိုလုပ်ဖို့ adapter မရှိလို့ပါ။ ဒီတော့ငါ usb ကလုပ်ချင်တယ်။
နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခု - Antocara ... ကျွန်ုပ်၏ micro sd အတွက် adapter ကိုဝယ်တော့မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် rom ဖြစ်ပါသလားသိလိုလျှင် donut update ကိုထည့်ရန်ပြtoနာရှိပါသလား။
micro SD adapter ကိုဝယ်ပါ။ update.zip ဖိုင် (ကောင်းစွာရေးသားထားသော) ကိုကဒ်ထဲသို့ကူးထည့်ပါ။ HTC recovery ကိုအသုံးပြုပြီး၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်သည်အဆင့်များအတိုင်းလုပ်ခဲ့သည် လျှောက်ထားခြင်းတင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အားဤရလဒ်ကိုပေးခဲ့သည်
2.- ဖုန်းကိုပိတ်ပြီး fastboot mode ဖြင့်ဖွင့်ပါ
၃.- recovery မတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်ထားသော file ကို copy-RAv3G.img သို့ android / tools သို့ကူးပါ။
၄။ ကွန်ပျူတာကိုကျွန်ုပ်တို့ START-RUN သို့သွားသည်။ ကျနော်တို့ cmd ကိုရေးပြီးသူကအနက်ရောင် terminal မျက်နှာပြင်ကိုဖွင့်လိမ့်မယ် cd ကိုဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်တွေ့သည်အထိ c ရေးသည်။ :> ထို့နောက်အောက်ပါတို့ကိုရိုက်ထည့်သည်။
cd android (နှင့် Enter နှိပ်)
cd tools များ (နှင့် Enter ကိုနှိပ်ပါ)
ငါ img ဖိုင်ကိုကူးယူပြီးပြီ။ အဆင့် ၃ တွင် tools folder ထဲသို့မည်သို့ထည့်ရမည်ကိုမသိပါ